सवारी साधनमा नयाँ भडादर निर्धारण, कहाँ देखी कहाँ सम्म कति ? हेर्नुहोस – Vision Khabar
सवारी साधनमा नयाँ भडादर निर्धारण, कहाँ देखी कहाँ सम्म कति ? हेर्नुहोस
। ११ आश्विन २०७५, बिहीबार २०:५४ मा प्रकाशित
जाजरकोट । जाजरकोटमा सवारी साधनको नयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाट बाहिरीने र भित्रने सवारी साधनको नयाँ भाडा दर निर्धारण गरिएको हो । बिहिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाहरुको बैठकले नयाँ भाडा दर निर्धारण गरेको हो ।
निर्धारण गरिएको भाडादर अनुसार खलंगा देखि काठमाण्डौ १ हजार ५ सय ४०, खलंगा देखी नेपालगन्ज ५सय ५० रहेको छ । खलंगा देखी सुर्खेत ४ सय ५०, खलंगा देखी रिम्ना १ सय २५, खलंगा देखी पिपे ६० रुपौया रहेको छ । त्यस्तै खलंगा देखी चिसापानी २ सय ५०, खलंगा देखी छेडा १ सय ५०, गैरीखाली देखी पाँचकाटिया ३ सय भाडा रहेको छ ।
छेडागाड देखी थलह २ सय ५०, नलगाड देखी रुकुम चिसापानी तल्लु ३ सय, छेडा देखी सुवानाउली ३ सय ५० भाडा निर्धारण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिनु भयो ।
व्यावसायीहरुले मनपरी भाडा असुली गरी यात्रुहरु ठगिएको गुनासो आएपछि प्रशासनले नयाँ भाडादर निर्धारण गरेको हो । बिहिबार निर्धारण गरिएको नयाँ भाडादर समय अनुकुल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले भनाई छ ।
सरोकारवालाहरुको उपस्थितीमा टिकटमा स्थान अनिवार्य खुलाउनु पर्ने र गाडीमा भाडा दर लेख्नु पर्ने, सार्वजानिक ठाउँ, टिकट विक्री स्थलमा भाडा दर सुचना पाटीमा राखेर सार्वजानिक गर्नुपर्ने लगायतको निर्णय गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरुको बैठकले निर्धारण गरेकोक नयाँ भाडा दर